yakakwira frequency induction brazing chubhu | induction kupisa muchina mugadziri | induction kudziya mhinduro
high frequency induction brazing tube
Brazing Thin Copper Tube Na Induction
Chinangwa: Kusungira tambo yakaipisisa yendarira yehuvha kusvika kune yakagadzirwa nechendarira pa 1400 º F uye kuvhara rumwe rutivi rwepurasitiki yemhangura ine ndiro yendarira.
Chinyorwa: Brass yakakodzera - 0.875 in2 uye 2.5 murefu (22mm2 x 64mm) Mhangura tube 0.01 mu (0.254mm) rusvingo Brass ndiro 0.10 mu (2.54mm) gobvu uye 0.5 mu X 0.25 inch Braze alloy shim uye chena nekubuda.
Kutya: 1400 ºF (760 ° C)
Zvombo: DW-UHF-10KW induction power supply yakagadzirirwa nechokudzivirira moto chekushandisa uchishandisa maviri 1.32μF capacitors (total 0.66 μF) Nyaya mbiri dzakagadzirirwa kutengesa kushandiswa kwemhepo. Nzira Yakaparadzaniswa, f yedu-turn induction coil inoshandiswa kupinza simba remhepo mumoto wakakodzera (Fig. 1). Kuchengetedza kupisa kwemakona emhangura yakagadzirwa nemhangura yakapetwa yemhangura, iyo duku yakawanda yeiripi (Fig. 2) yakawedzerwa kuti ipe kupisa mukati mehuni hwemhangura. Bhabhi shim preform inowanikwa panzvimbo yakabatana, uye inobva yafukidzwa nemhepo yakachena. Iyo yakakwirira yeiripi inogadziriswa kuti ipe huwandu hunopisa kuungano. Izvi zvinokonzera kutonhora kwechidimbu chendarira chakanyanyisa uye chidimbu chemhangura chendarira pane imwechete iyo inobvumira kufanana kwunifomu yebasa shim preform. Mamwe magumo emuchutu wendarira yakashongedzwa nekubudirira kushandisa 2-turn helical coil (Fig.3.)
Mhedzisiro / Bhenefiti • Kuchengetedzwa kwemhangura zvigadzirwa zvemagetsi
Categories Technologies Tags Brazing copper heater, Brazing Thin Copper Tube Na Induction, high frequency induction brazing tube, RF kusunga Copper pipe, RF kusungurudza mhangura tube